तयारी Archives - Lokpati.com
Tag - तयारी
काठमाडौं, १५ भदाै। यस वर्षको हरितालिका तीजका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि पशुपति क्षेत्रमा सबै तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।
कोषले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्दिर...
काठमाडौं, ९ साउन। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्मचार्यको घरमै आफूले जनयुद्धको सम्पूर्ण तयारी गरेको खुलासा गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय...
काठमाडौं, ३० असार । सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार भन्दै आजको नागरिक दैनिकले विप्लवसँग सरकारले वार्ता थाल्न तयारी थालेको दाबी...
१२ ठाउँमा सुरुङमार्गको अध्ययन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी
काठमाडौं, २१ असार । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १२ ठाउँमा सुरुङमार्गको अध्ययन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
नौबिसे–नागढुंगा, सिद्धबाबा, खुर्कोट–चियाबारी, कुलेखानी–भीमफेदी, हेम्जा, लामाबगर...
आज हुने भनिएको एसईइको नतिजा सर्‍यो, भोली सार्वजनिक गर्ने तयारी
भक्तपुर, ११ असार । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७५ सालमा लिएको एसईई परीक्षाको परीक्षाफल बिहीबार (भोलि) प्रकाशित गर्ने भएको छ।
बुधबार सार्वजनिक हुने भनिएपनि केही प्राविधिक कुराले गर्दा बिहीबार मात्र परिक्षाफल प्रकाशित हुने...
फेसबुक-ट्विटरमा कसैलाई जिस्काए पाँच वर्ष जेलकाे प्रस्ताव
काठमाडौं, ३१ जेठ । प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।फेसबुक ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधान यथावत् राखेर सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको...
रोट्रयाक्ट भेलाको तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, ३१ जेठ। काठमाडौंमा शनिबार हुने १२ औँ रोट्रयाक्ट डिष्ट्रिक क्लव एसेम्ब्ली तथा ११ औँ रिकग्निसन सेरेमोनीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कार्यक्रम सिद्धार्थ वनस्थली ईन्ष्टिच्युट बालाजु काडमाण्डौंमा हुनेछ।...
गौतमबुद्ध विमानस्थलको म्याद थप्ने तयारी
काठमाडौं, २२ जेठ। निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सम्पन्न हुनु पर्ने मिति असार १३ गते (जुन २८) हो । तर, अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको छ।
विमानस्थलको मुख्य भागका रुपमा रहेको ३ किलोमिटरको धावन मार्ग ए...
करिश्माले एसइइकाे परीक्षा दिने : कस्ताे छ तयारी ?
काठमाडौं, ४ चैत । सदावहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई अहिले परीक्षाको चटारो छ । उनी यो वर्ष काठमाडौंबाट एसइइकाे फाइनल परीक्षा दिँदैछिन् । अब परीक्षाको मिति ६ दिन मात्र बाँकी छ। त्यसैले परीक्षालाई लक्षित गरेर उनी अहिले आफूले...
किरण क्रियशनको ‘छोएर गयो पवनले’ गीत सार्वजनिक (भिडियो)
राष्ट्रपति कार्यालयले ओलीलाई तुरुन्तै कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्छः पूर्वसभामुख ढुंगाना
सुर्योदय लघुवित्तले माग्यो २२ कर्मचारी, ८ पासले पनि निवेदन दिन सक्ने
वामदेवले मागे ओली खेमाको पार्टी अध्यक्ष
आठ बीमा कम्पनीहरुले आईपीओ जारी गर्दै
संसद पुनस्थापना नभए, रामनाम जपेर मात्र बस्दैनौंः डा. भट्टराई
संसद् विघटनबारे लेखक संग्रौलाको दुई प्रश्न